Ny lahatsoratr'i Guy Goldstein momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Guy Goldstein
Guy dia consultant automatique marketing sy operations. G8 Teknolojia dia mampiasa fomba feno hybrid amin'ny automatisation marketing, izay samy avy amin'ny traikefa nentim-paharazana sy marketing izay manampy ny mpanjifa hahomby. Ny fianteherana amin'ny traikefa sy ny fanadihadiana G8 dia miara-miasa akaiky amin'ireo mpanjifany mba hanomezana varotra mifangaro voafaritra tsara ho an'ny orinasam-pifandraisana tsirairay.
Marketing amin'ny kaonty Marketo: inona no tokony ho fantatrao
Alatsinainy Oktobra 10, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Guy Goldstein
Marketo dia namoaka ny kaonty Account Marketing Marketing (ABM) ho ampahany amin'ny ezaka mitombo hanohanana tsara kokoa ny fifandraisana amin'ny orinasa. Na dia fanovana tany am-boalohany aza ilay fitaovana ary mampiseho fampanantenan-tena betsaka, misy fomba sasany hametrahana ny ABM hanova orinasa manomboka mampiasa ny sehatra. Marketo dia mamaritra singa telo miavaka amin'ny vahaolana ABM: Ny fahaizana mikendry sy mitantana kaonty sy lisitry ny kaonty. Ny fahaizana manao lasibatra